I-iPhone XS Max kunye ne-Samsung Galaxy S9 ubuso ngobuso, yeyiphi engcono? | Iindaba zeGajethi
Imfazwe iqale phakathi kwezona ndawo zinokubakho ezona zixhobo zihamba phambili kwintengiso, ngokucacileyo sithetha ngeSamsung ye-Samsung S9 kunye ne-iPhone XS, siphambi kweeflegi ezimbini eziyinyani zenkampani nganye, nangona kunjalo ... Uqinisekile ukuba yeyiphi engcono kubo? Sibeke i-iPhone XS kunye ne-Samsung Galaxy Note 9 ubuso ngobuso emva kwenyanga yokusetyenziswa kwaye esi sisigqibo sethu.
Hlala nathi kwaye ufumane ukuba leliphi icala i-Samsung Galaxy Note 9 ingcono kwi-iPhone XS kwaye ngokuchaseneyoKubalulekile ukuba uthathele ingqalelo zonke ezi datha ngaphambi kokuba uqhubeke nokuthenga kwakho.
Njengokuba ukuyibona ngamehlo akho akufani nokuyifunda, andikwazi ukuphoswa lithuba loku Ndicebisa ukuba uchithe ixesha ubukele ividiyo ukuba sikushiye ekuqaleni kweposi, yividiyo apho sihlalutya zombini izixhobo kwaye siyakwazi ukufikelela kwizigqibo malunga nokuba yeyiphi engcono kubo, Kwijelo leGajethi yeendaba uza kufumana iividiyo ezifanayo kunye nomxholo malunga nezixhobo ezifanelekileyo kwimarike. Ngaphandle kokulibaziseka ngakumbi siyaqhubeka ukubona ukuba ngawaphi amacandelo nganye yezi terminals iphumelela eyona imbangi yayo ethe ngqo.
1 Isikrini: Ezona zimbini zibalaseleyo kwintengiso
2 Uyilo: Izinto zepremiyamu zilungelelaniswe ngokwahlukileyo
3 Amandla kunye nokugcina: ucinga ukuba uya kusilela?
4 Ikhamera: I-Samsung linyathelo elinye phambili
5 I-Samsung Galaxy Note 9 ingcono kangakanani?
6 Iphucula njani i-iPhone XS Max?
7 Uthelekiso lwamaxabiso
Isikrini: Ezona zimbini zibalaseleyo kwintengiso
Ngaphandle kwamathandabuzo ezona zikrini zibalaseleyo kwezentengiso ezihambayo, okumangalisayo kukuba kufuneka siqwalasele ukuba zombini izikrini zenziwe yiSamsung, ngelixa i-SuperAMOLED yayo Galaxy Note 9 Inenqaku le-18.5: 9, enikezela umlinganiso wescreen se-83,4%, apho ineqhayiya lesisombululo seepikseli eziyi-1440 x 2960, nesiphumo sayo sisonke ngamaphikseli angama-516 nge-intshi, isisombululo esimnandi ngokwenyani. I-iPhone XS Max Ishiye ngasemva kolu luhlu, isishiya nomba we-19,5: 9 ngomlinganiselo osondele nakuma-83,4% ngelixa unikezela isisombululo esisezantsi kancinci, iipikseli eziyi-1242 x 2688 ezinokubangela iipikseli ezingama-458 nge-intshi, nangona kunjalo Itekhnoloji esetyenziswe kule meko yi-OLED. Akukho mveliso ifunyenweyo Mnyama" /]
Kule meko, i-Samsung Galaxy Note 9 ibonelela ngesisombululo esiphezulu, ngaphandle kwento yokubaBonisa iMate ibonakalise isikrini se-iPhone XS Max njengeyona intle kwintengiso. Inyani yile yokuba oku kuya kuxhomekeka kakhulu kukhetho lomsebenzisi, kuba bobabini banokuhambelana kwe-HDR, umahluko omkhulu kunye nokuqaqamba okuhle. Ukumelwa kombala kulapho sifumana khona umahluko wokuqala, ngelixa iApple isebenzisa ithuba leTone yeNyaniso yokubonelela ngemifanekiso eyiyo kangangoko kunokwenzeka, iSamsung ihlala ikhetha ukugcwalisa imibala kancinci ukuyenza icace ngakumbi kwaye ibetha, ngeli xesha silapha ukuya kuseka iqhina lobuchwephesha ekufuneka lilungelelaniselwe iimfuno okanye ukuthanda komsebenzisi wokugqibela.
Uyilo: Izinto zepremiyamu zilungelelaniswe ngokwahlukileyo
Olunye uthayi lobuchwephesha, esinalo kwelinye icala I-Samsung Galaxy Note 9 nomphambili wee-intshi ezi-6,4 iyonke, enika ubude beemilimitha eziyi-162, zikhatshwa ziimilimitha ezingama-76 ububanzi kunye neemilimitha eziyi-8,8 ubukhulu. Konke oku kuya kusinika ubunzima obupheleleyo obungaphantsi kwe-201 gram. Kwicala lakhe i I-iPhone XS Max se sime kwiimitha eziyi-157 ukuphakama nge-77 yeemilimitha ububanzi nge-7,7 yeemilimitha ubukhulu kuphela, sinika ubunzima bebonke obungama-208 iigrem (noko ngaphezulu kweGalaxy Note 9).
Sifumana oko ngelixa i-Galaxy Note 9 ilula kancinci, I-iPhone XS Max inciphile kancinci, oku kunesizathu sayo, kwaye yile yokuba ngelixa i-Galaxy isebenzisa i-aluminium kwisisu sayo, u-Apple ukhethe intsimbi epholileyo njengoko besele besenzile nge-Apple Watch yabo emsebenzini, nanjengoko nabo wenze kudala nge-iPhone 4. Yiba nokuba kunjalo, oku akuyi kuchaphazela ukuzinza okanye uyilo lweemodeli zombini, ezinganyangekiyo ngamanzi, kunye neenguqulelo ezilungileyo zeGorilla Glass kwaye intle kakhulu, inikwe ngombala onomdla. Uluhlu. Kubonakala ngathi kwakhona, iya kuba ngumcimbi wokungcamla, mhlawumbi umahluko ophawuleka kakhulu kukuthelekisa "ishiya" ye-iPhone kunye nesakhelo esiphindwe kabini seGlass Qaphela 9, kunye nolungelelwaniso ngokuthe nkqo lwe-iPhone XS ngokungakumbi Inguqulelo yesiqhelo ethe tyaba ekhoyo kwimodeli yeSamsung.
Amandla kunye nokugcina: ucinga ukuba uya kusilela?
Sijongene neeterminal ezimbini ezinamandla kwintengiso, i iPhone XS Max yokunyusa i-A12 Bionic ehamba ne-4GB ye-RAM, i-7 nanometer yokuqala ithengisiwe. Sikwanayo I-Samsung Galaxy Note 9 nge-Exynos 9810 eyenziwe ngokwakho kwi-nanometer ezili-10 kunye nokukhetha phakathi kwe-6GB kunye nenye inguqu ye-8GB. Ngaphandle kwamathandabuzo sinezona ndawo zimbini zibalaseleyo ngokubhekisele kumandla nasekusebenziseni, asithandabuzi ukuba sinokuqhuba iFortnite kunye nayo nayiphi na inkqubo yokuhlela ngaphandle komda, ngenxa yoko amandla awunakubakho ngokungathandabuzekiyo xa kufikwa kukwahlula nayiphi na kwezi terminals.
Ngokubhekisele kugcino, sifumana eyona nto iphambili kuyo Galaxy Note 9, sineenguqulelo ezimbini kuphela, ukusuka kwi-128 GB ukuya kwi-512 GB ukuya kwi-256 GB, kodwa Singayonyusa ukuya kwi-1 TB ukuba sidibanisa ikhadi le-microSD I-512 GB, inokwenzeka ukuba asinayo kwi-iPhone XS Max, eya kusigcina sinqunyelwe kuyoI-64/256/512 GB yememori yefleshi. Kuqhelekile ukuba kolu hlobo lweetheminali sinokukhetha ikhadi le-MicroSD.
Ikhamera: I-Samsung linyathelo elinye phambili
I-iPhone XS Max isinika ikhamera I-12MP isinxibelelanisi esingasemva esinezibini esine-zoom ebonakalayo ebonakalayo, kanye iimpawu ezifanayo ezinikezelwa kwi-Samsung Galaxy Note 9. Nangona kunjalo, umahluko uqala ukuphawulwa kwiifoto zokuqala, imodeli yoMzantsi Korea yenza ngcono kakhulu kwiimeko eziphantsi zokukhanya, esivumela ukuba sithathe imifanekiso ngaphandle komzamo omncinci kunye neziphumo ezingcono. Abasebenzisi abaninzi abayithandi into yokuba ikhamera ye-Samsung ithande ukugcwalisa imibala, kodwa yinto esinokuyihlengahlengisa kamva, nangona kunjalo indlela ekubamba ngayo ukukhanya ayinakuthelekiswa nolunye uphawu. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, zombini iikhamera zinakho ukufota kwi "portrait mode".
Ilungu le-12 MP f / 1.8, OIS, PDAF I-12 MP f / 2.4, OIS, PDAF, 2x ukusondeza okubonakalayo I-7 MP, f / 2.2
ISAMSUNG GALAXY QAPHELA 9
I-MP ye-12, iPixel ezimbini, ukuvula ngokungafaniyo f / 1.5-2.4, OIS Ifowuni ye-12 MP, f / 2.4, AF, OIS Ilungu le-8 MP, AF, f / 1.7
Ngokwenxalenye yayo, i-Galaxy Qaphela i-9 inekhamera yangaphambili ye-8MP kwaye i-iPhone XS Max ine-7MP, oku kusikhokelela kwisigqibo sokuba ikhamera ye-Galaxy Note 9 ingangcono, kodwa izinto ziyatshintsha ngokwee-selfies zithetha oko. Isamsung ine "modeli yobuhle" esingenakubaleka kuyo, ethambisa iifoto ezininzi "zeeselfie" kwaye ibenze babonakale bengeyonyani, yinto ephazamisayo ngokwenene kumsebenzisi oqhelekileyo okanye encinci enikwe olu hlobo lwemifanekiso. Ke ngoko, isiphelo sam kukuba Ngelixa ikhamera yangaphambili ye-iPhone XS Max ibhetele, ngasemva (ophambili) weGalaxy Note 9 ithatha ngakumbi.
I-Samsung Galaxy Note 9 ingcono kangakanani?
Siza kuthatha ukhenketho olufutshane lokuphuculwa yi-Samsung Galaxy Note 9 ngokubhekisele kwimbangi yayo ethe ngqo, i-iPhone XS Max:
Umfundi weminwe: Isifundi somnwe yinto enomdla eyathi yathandwa ngu-Apple, ayilahle ngobusuku obunye. Inqaku leGlasi liyaqhubeka nokugcina le ndlela (kunye nabanye) yokungqinisisa esexesheni, ethembekileyo, eqinile kwaye ngaphezu kwayo yonke into ekulula ukuyisebenzisa, ebonisa abasebenzisi ezinye iindlela xa kufikwa ekukhuseleni iitheminali zabo.
I-S-Pen: Le pen yokubhala yedijithali isebenza kakuhle kwaye yahluke kakhulu. Abasebenzisi be-Samsung bayayithanda indlela esebenza ngayo kunye nendlela ekulula ngayo ukuyisebenzisa, kwaye inyani kukuba siyithandile indlela esebenza ngayo nathi.
Itshaja ekhawulezayo: Isamsung ibandakanya umxholo weGlass Note 9 itshaja ekhawulezayo, enye into imbangi yayo evela kwinkampani yeCupertino engenakuqhayisa ngayo kwaye ixatyiswe kakhulu.
Unxibelelwano kunye ne-Samsung DeX: Enkosi kwikhebula le-USB-C kunye nokuhambelana nenkqubo ye-Samsung DeX, amathuba eGlass Note 9 phantse aphele. Asilibali i-3,5 mm Jack nayo.
Iphucula njani i-iPhone XS Max?
Ngoku siya kwelinye icala, masibone ukuba yeyiphi imiba i-iPhone XS Max ebonakale ingcono kunembangi yayo ethe ngqo, i-Galaxy Note 9:
Ukulungiswa kunye nesoftware: Isoftware yobunini, engenaleko isoftware kunye nokusebenza ngokugqwesileyo kwenza ukuba i-iPhone XS Max ibe yenye indlela yabo bafuna ifowuni efanelekileyo nesoftware epolishwe kakhulu.
Ukuzimela: Ukuzimela kwe-iPhone XS Max kulunge kancinci kunaleyo ye-Samsung Galaxy Note 9
I-ID yobuso: Ukuqwalaselwa kobuso be-iPhone XS Max sisalathiso sehlabathi ngokubhekisele kukhuseleko kunye nentuthuzelo.
Ngoxa i I-iPhone XS Max ungayifumana nge-1259 euro ngohlobo lwayo lwamaxabiso aphantsi,el I-Samsung Galaxy Note 9 I-128GB kunye ne-6GB yememori ye-RAM iqala ukusuka 1008 euro ngokusemthethweniNangona ixabiso kunye nexabiso eliqhelekileyo lehla kwi-Android kungekudala liza kuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-iPhone XS Max kunye ne-Samsung Galaxy S9 ubuso ngobuso, yeyiphi engcono? [IVIDIYO]
Uyenza njani iakhawunti ye-imeyile